Lasa Malaza be Tamin’ny Aterineto Any Taiwan Ilay Dokambarotry Ny McDonald Maneho Lehilahy Mamboraka Amin-drainy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2016 9:32 GMT
Ilay hafatra amin'ilay kaopy milaza hoe, “Tia lehilahy aho”. Sary: Dikasarin'ny YouTube.
Nosoratan'i Karen Cheung ity lahatsoratra ity tamin'ny voalohany ary navoaka tamin'ny Hong Kong Free Press ny 7 Martsa 2016. Ito dika ito dia naverina navoaka tamin'ny Global Voices ambany fifanarahana fiaraha-miasa.
Lasa nalaza be tamin'ny Aterineto ary noraisin'ireo mpisera amin'ny Aterineto rehetra tsara ilay dokambarotry ny McDonald any Taiwan mampiseho zatovolahy namboraka tamin'ny rainy tao amin'ny tambajotranà sakafo vita haingana. Kanefa, notsikerain'ireo vondrom-pivavahana sahala amin'ny Taiwan Family ilay izy, izay namoaka fanambaràna miampanga ny McDonald amin'ny fandefasana ireo hevitra “tsy mendrika” ho an'ny ankizy.
Hita ho an'isan'ireo mivoatra any Azia Atsinanana ny zon'ireo vehivavy tia vehivavy, lehilahy tia lehilahy, manana fananahana roa, ary ireo nanova fananahana (LGBT) any Taiwan. Ny taona lasa izao, ny diaben'ny reharehany no lehibe indrindra tao Azia, miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana niisa maherin'ny 78.000 nanjohy azy teny an-dalambe. Ho fanampin'izany, nampiseho ny fanohanany ny zon'ireo LGBT ilay Filoha vao voafidy, Tsai Yingwen, ary nankasitraka ny fanambadian'ny mitovy fananahana.
Nomen’ ny fiarahamonina sosialy malalak'i Taiwan sehatra malalaka ireo dokambarotra feno famoronana, izay miresaka ireo fifandonan'ny andian-taranaka tsy mitovy vanim-potoana momba ny firehana ara-nofo mahatonga resabe.
Ilay zatovolahy sy ny rainy mipetraka am-pahanginana eo amin'ny McCafe an'ny McDonald no manokatra ilay lahatsary. Avy eo ilay lahatsary mampiseho hafatra nosoratan'ilay zatovolahy teo amin'ny kaopy, manatrika ny rainy, izay milaza hoe “Tia lehilahy aho.” Mitsangana ilay lehilahy lehibe ary niala, fa niverina avy eo ary nanoratra tamin'ilay kaopy koa ary nanova ilay hafatra hoe “Manaiky anao tia lehilahy aho.” Nitomany avy eo ilay zatovolahy ary nifampitsiky izy mianaka.
Navoaka ny 4 Martsa tao amin'ny Youtube ilay lahatsary ary nahazo jery mihoatra ny 770.000 . Nozaraina maherin'ny in- 9.000 koa ilay izy tao amin'ny Facebook, miaraka amin'ireo domberina tsara; araka ny fihetsehampo tao amin'ny Facebook, 10.000 no nankafy ilay lahatsoratra, 4.100 ‘tia’ azy, 83 ‘tezitra’ ary 1.800 ‘nalahelo’ tamin'io. Naneho hevitra tamin'ny YouTube ny olona iray: “Nampitomany ahy ireo segondra roa farany”, ary ny iray nilaza hoe, “Manohana ny fanambadian'ny lahy samy lahy!”
Brenda Kou, lehiben'ny sampana dokambarotra ao amin'ny Orinasa McDonald, nilaza tamin'ny vohikalam-baovao tsy miankina Apple Daily fa ny tian'izy ireo naroso tamin'ilay dokambarotra dia ny haneho ny fanahin'ny fiseraseràna sy ny fifampiresahana, izay fototry ny fahitàna marimaritra iraisana. Nlaza ihany koa izy fa tiany haseho fa afaka henoina ao anatin'ny fiarahamonina ihany koa ireo feo samihafa.
Nilaza i Murphy Chou, talen'ny famoronana ao amin'ny Leo Burnett Taiwan – izay namokatra iny dokambarotra iny – fa tsy fombàna ny resaka LGBT iny; fa kosa fanehoana ny tolona atrehana rehefa lasa ray aman-dreny te-hanohana ireo zanany. Nampiany hoe tany Frantsa nanodidina ny taona 2010 dia efa nandefa dokambarotra mikasika ny LGBT ny McDonald.
Ny harivan'iny, namoaka fanambaràna ny Taiwan Family, vondrona tsy mankasitraka ny LGBT, nilaza fa toherin'izy ireo ny fanindrahindràna atao imason'ny daholobe ireo hevitra izay mandrisika ny fihetsika LGBT. Nilaza ihany koa ilay vondrona fa toerana andehanan'ireo ankizy maro ny McDonald ary niantso ireo ray aman-dreny izy mba hobodo tsy handeha any amin'ny McDonald, tamin'ny filazàna hoe, ”mahatsapa tena ho voatarika aho amin'ny fampiasàna fotsiny ny toerana fidiovany ,” hoy ny tatitry ny vohikala Ming Pao.
Maro ireo mpisera amin'ny Aterineto efa niandry izay fihetsehampo mitazona ny fahiny izay, ary ao amin'ny sehatra firesadresahana, Disp BBS, mpampiasa iray no nanangona ny lisitr‘ireo orinasa izay mankasitraka ny zon'ireo LGBT, tafiditra amin'izany ny Google, Facebook, Apple ary Starbucks. Avy eo, nanao fanamby tamin'ireo fikambanana fivavahana ilay mpampiasa mba tsy handeha amin'izy rehetra ireo.
Ao amin'ny Twitter, nanipika ilay lisitra i @tuzzi ary nitsikera ireo vondrona manohitra ny LGBT:
Miantso ny tsy handehanana any amin'ny McDonald ny Taiwan Family. Efa omaly no naminavina izany ireo mpisera tamin'ny Aterineto. Jereo ny Disp BBS https://t.co/BHS0HlE7QX // Inona no tsy mety amin'io vondron'olona io? Maro tokoa ireo fianakaviana mivaky any Taiwan, inona no nataon'izy ireo mba hiarovana azy ireo? Eo ankilan'ny fanoherana ny zon'ireo LGBT, inona no nataon'izy ireo? Milaza ireo vondrona tsy tia LGBT ireo hoe miaro ny fianakaviana, tsy fihatsarambelatsihy eo amin'ny imason'i Jesoa ve izany filazàna izany?